Hevitry ny karatra Emperora Tarot - Ny Dikan'ny Karatra Tarot
Ny dikan'ny karatra Emperora Tarot
Lisitry ny karatra Emperora Tarot
Ny mahitsy Emperora
Nivadika ilay Emperora
Symbolism an'ny nomeraolo an'ny Emperora
Miverina amin'ny Major Arcana
Famaritana marobe momba ny karatra tarot The Empress no manome ny dikany ho an'ohatra an'ohatra hoe Gaia, ilay Reny eto an-tany, ny Andriamanitra masina na ny fitsipika ary koa ireo andriamanibavy Isis, Demeter ary Freyja.
Ny taratra Emperora dia ireo zavatra rehetra ireo ary maro hafa.
kosa Ny karatra tarotan'ny Mpisoronabe maneho ny fanjakana madio na virjiny amin'ny tsy fahatsiarovan-tena kolontsaina na cosmic, ny taratra Empress dia maneho ny mety tsy manam-petra amin'ny famokarana sy ny famoronana izay mitranga raha vantany vao 'nateraky ny fahatsiarovan-tena' ny fahatsiarovan-tena.
Ka inona marina no dikan'izany?
Rachel Pollack ( Tarot Wisdom, 2008, pg.58 ) dia mamaritra ny taratra The Empress, 'Izy no mpanome sy mpanapaka ny lalàn'aina'.
Eny, eny. Rehefa miseho amin'ny tarot mamaky zavatra ity vehivavy tsara tarehy ity dia efa tena hisy ny zavatra!
Ny karatra taratra Empress dia fampahatsiahivana ny saina mahatsiaro fa amin'ny maha-fanahy anao dia tsy nesorina tamin'ny loharanon'Andriamanitra ianao, napetraka ao amin'ny iray amin'ireo famoronana mahatalanjona indrindra - vehivavy. Izany no mahatonga ny tontolo manodidina ny The Empress manan-karena be. Ny karatra Empress dia mampiseho ny fanomezam-pahasoavana avy amin'ny hatsaran-tarehy sy ny haben'ny andriamanitra amin'ny toerana rehetra: amin'ny natiora (ala) ary amin'ny sivilizasiôna (tanimbary). Ny riandrano dia ny firotsahan'ny fitiavam-panahy sy angovo famoronana.
Ny herin'ny fifaliana asehoan'ny taratra Empress dia ara-batana sy ara-pihetseham-po, fa ara-panahy ihany koa. Izany no mahatonga ny lanitra ao amin'ny karatra Empress MAVO .
Ny tehin'i Empress dia mariky ny fahefana sy ny hery. Voasioky ny kibon'ny masoandro, mamantatra io hery io ho masina. Ny satroboninahiny kintana 12, misolo tena ny tranon'ireo zodiaka , dia mampiseho fa ny Emperora dia mpanjakavavin'ny lanitra.
ny harato raozy amin'ny akanjon'i Empress dia tsy midika fitiavana ara-batana fotsiny, fa filan'ny nofo amin'ny ankapobeny, ary ny lokon'ny akanjo, fotsy , dia mariky ny ara-panahy madio. Ity hafatra ity dia manamafy ny mariky ny Venus amin'ny ampinga miendrika fo Emperora. Ny dabilio vato dia mampiseho fa ny hafatry ny karatra momba ny fientanam-po sy ny fifaliana dia fitsipika cosmic fototra.
Arthur E. Waite, mpikaroka okultista malaza dia niantso ny The Empress tarot ho Refugium Peccatorum, ilay fialofana ho an'ny mpanota. Refugium Peccatorum dia teny katolika romana ho an'i Maria Virjiny. Amin'izany, The Empress (na dia tsy virjiny aza) dia maneho ny endrika manasitrana indrindra amin'ny reny sy ny reny. Ho an'iza koa ankoatra i Neny tia tsy misy fepetra? Iza koa fa i Neny no mamboly ny tsara indrindra amin'ny andian'ondriny, na ny an'ny tena, na ny an'izao tontolo izao (mila vohitra izany)?
Ny karatra Empress tarot dia heverina fa manondro fitondrana vohoka. Na dia mety marina aza izany, ny fitondrana vohoka dia mety amin'ny endrika ara-batana, ara-tsaina ary ara-pihetseham-po. Ny ‘zazakely’ dia afaka maneho tandindona zazalahy / zazavavy ara-bakiteny saingy mety hanehoana orinasa vaovao, tetikasan-tsekoly, famoronana sns.
Noho izany, aza hadino ny mijery ireo fitoriana manodidina ny taratra The Empress raha te hahalala bebe kokoa momba ny karazana 'fitondrana vohoka' resahina ao amin'ny vakiteny.
Hevitry ny Tarot Empress mahitsy
Satria ny tarot Empress dia mifandray Venus , andriamanibavin'ny fitiavana sy fahafinaretana, ity karatra ity matetika dia manolotra fitiavana am-pitiavana sy ara-batana ary koa ny fifaliana azontsika avy amin'izany. Rehefa dinihina tokoa, io no fizotran'ny karazan'olombelona maharitra.
Ity karatra tarot ity koa dia maneho ny herin'ny fotoana mandondona ny fonao rehefa miteny hafa ilay olona manokana hoe eny. Ny taratra Empress dia karatra fanambinana, midika izany fa tsy ny harena ara-bola ihany no ambarany fa koa ny fahafinaretana hankafy azy io. Inona moa no mahatsara ny fananana asa an-tapitrisany dolara, raha miasa ho faty amin'izany ianao? Na izany aza, ny hafatra lehibe indrindra nataon'i The Empress dia iray amin'ny fahafaha-mahita vaovao ahazoana mankafy fiainana.
Toa an'i Eugene Henderson ao amin'ny tantara nofaritana an'i Pulitzer Prize an'i Saul Bellow Henderson , Ilay Mpanjakan'ny Orana , azonao atao ny mahazo ny fitahiana rehetra azon'ny fiainana apetraka aminao ary mbola tsy afa-po ihany. Manankarena sy voahodidin'ny fianakaviana be fitiavana sy namana mahafinaritra, dia mbola ory i Henderson. Rehefa manomboka mibitsibitsika ny feo anaty mitabataba, 'tiako izany. Tiako, 'hoy izy nanomboka tamin'ny odyssey manaitra ny afovoan'i Afrika. Izy dia manana fahasahiana - na fahatsapana - mangataka azy io amin'ny farany inona maniry izany. Mamaly ilay feo hoe: 'Ho velona.' Izany fahatsapana izany, fa ny dikan'ny fiainana dia VELONA , no lesona lehibe azo raisina amin'ity karatra ity.
pisces lehilahy sy pisces vehivavy eo am-pandriana
Zava-miafina lalina tokoa ity ka toa tsy mistery mihitsy - matetika loatra dia raisin'ny olona ho zava-poana ny fiainana. Tadidio fa fanomezana ny fiainana, ary ny tanjon'ny fanomezana dia ny mitondra fahasambarana. Eritrereto ny hafaliana tsapanao rehefa gaga ianao amin'ny olona iray amin'ny fanomezana iray ary faly ilay olona, ​​milaza aminao fa io indrindra no notadiaviny hatrizay. Ny fanomezana fanomezana dia momba ny fifaliana fa tsy zavatra hafa. Raha misy antony manosika hafa, lasa fanomezana vola ny fanomezana iray, ohatra, raha mividy firavaka lafo vidy ho an'ny olon-tianao ianao ho teti-dratsy hamonjy ny fifandraisanareo.
Empressed Tarot Reversed dikan
Rehefa avadika, ny karatra taratra Empress dia matetika mampitandrina ny amin'ny tsy fandanjalanjana ara-pihetseham-po vokatry ny fahatakarana tsy misy kilema ny fanirianao - na ny fahatakarana tsy misy kilema ny faniriana mihitsy. Indray mandeha ianao dia manjombona amin'ny fifaliana, ny manaraka dia mipoaka amin'ny fahatezerana ianao, ary avy eo te-handady ao anaty lava-bato ary hatory tsy lavitra.
Moa ve voafaritra tery loatra ve ny fahasambarana? Mampifantoka ny sainao amin'ny faritra vitsivitsy fotsiny ve ianao? Aza adino fa zavatra maro amin'ny fiainana no mety hahafinaritra. Na dia mijanona eo amin'ny masirery sy mahazo tehaka mikotrokotroka avy amin'ny mpankafy aza dia azo antoka fa avo lenta ara-pihetseham-po, mandreraka be kosa amin'ny fomba fiaina iray. Ny barbecue Alahady ao an-tokontany, ligin'ny bowling Alakamisy alina, na miforitra miaraka amina boky tsara lavitra ny korontana eo amin'izao tontolo izao dia mety hahafaly ihany koa.
Mety diso ny fanantenanao, na diso ny famaritanao ny fahombiazanao. Ohatra, maro ny olona mamaritra ny hatsarana - eny fa na ny hatsarana anaty aza - amin'izay hitany amin'ny haino aman-jery. Na dia mpitsangatsangana any an'efitra aza dia tsy kapoakan'ny dite rehetra, zava-dehibe ny hitadidiana fa ny tontolo mandositra mahagaga hitantsika amin'ny fahitalavitra dia tsy maodely mahomby amin'ny fiainana tena izy.
Na izany aza, ny fandavana ny fahafinaretana tanteraka dia tsy misy vokany. Vitsy dia vitsy ny olona voafidy ho amin'ny fomba fiaina misandratra. Na ny moanina bodista aza dia mahazo fananana valo. Ankoatr'izy ireo, dia voatosiky ny faniriana koa: ny faniriana fahamarinana ara-panahy.
Taratasy Metaphysical an'ny karatra Empress Tarot:
Taratasy Kabbalistic: Daleta
Làlan'ny hazon'aina: Hokhmah (Fahendrena) mankany Binah (fahazoana)
Kristaly fanasitranana: robina , Green Jade
Ny karatra Empress & Tarot Numerology
Ny taratra Empress no Major Arcanum fahatelo. ny Isa 3 maneho ny fiainam-baovao noforonina avy amin'ny fifandraisan'ny mifanohitra.
Raha ny marina, ny Empress dia manambatra ny lahy sy ny vavy amin'ny andriamanitra, miteraka izao tontolo izao vokatr'izany. Midika izany fa ny famoronana izao tontolo izao dia fihetsika fitiavana. Araka ny fanandroana, ity isa ity dia mifandray amin'i Jupiter, eto amin'ny lafiny famindram-pon'Andriamanitra.
dia aquarius roa lalao mety
firy ny planeta ao amin'ny rafi-masoandro
vehivavy sagittarius ary manangana lehilahy hanao firaisana
inona no dikan'ny nofy momba ny manidina